Momba anay - Hebei Meiben Technology Co., Ltd.
Tsipika famokarana tsy miharo menaka
dia miorina ao amin'ny Distrikan'i Xiong'an Vaovao any afovoan'i Beijing-Tianjin-Hebei, miaraka amin'ny tontolo tsara sy fitaterana mety. Ny orinasanay dia manana sangany matihanina, avo lenta, miorina amin'ny kalitao, mpisava lalana amin'ny fanatsarana tsy tapaka sy ny famolavolana vokatra vaovao. , Ary manana ekipa serivisy varotra sy varotra matanjaka, manenjika ny mpanjifa aloha. Izy io dia s, SS, SSS, SSMMS, SMMS, tsipika famokarana lamba tsy vita tenona SMS mifangaro, tsipika famokarana lamba tsy tenona spunbond, milina lamba tsy tenona spunbond, fitaovana vita amin'ny lamba tsy tenona, milina famokarana lamba tsy tenona ary hafa spunbonded lamba tsy tenona Collection. Ny famokarana tenona dia orinasa tompon'andraikitra voafetra manambatra fitaovana fanamboarana, fikarohana sy fampandrosoana, famokarana sy ny varotra.
Ny orinasa amin'izao fotoana izao dia manana andalana famokarana 10 an'ny S, SS, SSS, SMS, SMMS, SSMMS, sns., Ary manondrana any Korea Atsimo, Torkia, India, Azia atsimo atsinanana ary ny faritra hafa, ary manome serivisy ajanona, toy ny fametrahana fitaovana , fanirahana sy fiofanana. Ankafizo laza malaza ao an-trano sy any ivelany. Mahatoky.
Ny orinasa dia manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, famolavolana sy fanamboarana fitaovana andian-dahatsoratra milina lamba sy andian-damba tsy tenona, ary ny mari-pahaizana teknika ankapobeny dia nahatratra ny haavon'ny vokatra mitovy amin'izany.
Meiben Masinina dia mifikitra hatrany amin'ny foto-kevitra "fikarohana tsy tapaka, fanavaozana ary fikatsahana fahalavorariana", ny filozofia momba ny "kalitao aloha, serivisy aloha", ary mampiasa ny ekipa haitao avo lenta matanjaka manome serivisy ho an'ny mpanjifa. Serivisy tena tsara.
Mbola lavitra ny lalana, ary hiatrika ny fotoana sy ny fanamby amin'ny fotoana ny olona Meiben, manohy mihidy amin'ny fahitana ny "fanaovana ny marika Meiben ho marika safidy voalohany amin'ny indostrialy tsy tenona", manizingizina ny kalitao ho fanalahidin'ny fandresena, fanavaozana ho fototry ny fampandrosoana orinasa, ary ho an'ny mpanjifa ho an'Andriamanitra; manohy mampihatra ny foto-kevitry ny serivisy momba ny "fiaraha-miory, tsy misy farany, fahatsoram-po", ary ezaho ny hahazo marimaritra iraisana amin'ireo mpampiasa maro an'isa: "Safidio Meiben, manaova asa mamirapiratra"!
Efitra 401, Komitim-pitantanana ny faritra fampandrosoana ara-toekarena Suning County, Tanànan'i Cangzhou, Faritanin'i Hebei
Tags mafana, Vokatra mafana, Sitemap testkewords, Teny lakile B, Teny lakile A,